Sida wax looga beddelo fiidiyoowga Photoshop: waa hab fudud oo dhakhso badan | Abuurista khadka tooska ah
Sida wax looga beddelo fiidiyaha Photoshop
Judit Murcia | | Tababarada
Wax ka beddel fiidiyowyada Photoshop? Xaqaas waad u aqrisay, aaladani kaliya nama ogolaaneeyso inaan saxno sawirada. Hayso a fursado badan oo ay tahay inaad ogaato.
Haddii aad hayso fikrado ah sida loo sameeyo GIF, way kuu sahlanaan doontaa inaad fahamto sida casharradan u shaqeynayaan. Haddii kale, ha ka welwelin sababta dhabta ah fududahay in la fahmo.
1 Ku dhaji lakabyada Photoshop
2 Abuur fiidiyoow: talaabo talaabo ah
3 Sida loo abuuro lakabyada
5 Dhoofinta video
Ku dhaji lakabyada Photoshop
Marka hore, waa lagama maarmaan in la fahmo taas in la sameeyo a GIF waa inaan heysanaa muuqaalkeena ama sawirkeena loo kala qaybiyay lakabyo kala duwanSi kale haddii loo dhigo, ficil kasta ama shay kasta oo aan doonayno inaan ku darno taxane kasta waa inuu ku yaal meelo kala duwan.
Abuur fiidiyoow: talaabo talaabo ah
Ugu horreyntii, waa inaan tagnaa menu-ka weyn oo aan raacnaa wadada xigta:
Daaqada - Waqtiga
Daaqad cusub ayaa ka soo muuqan doonta xagga hoose, waa miiska tafatirka. Waan la shaqeyn karnaa waqtiga o sida animation jir. Qaybta dambe way kuu fududaan doontaa inaad maamusho, waana ay ka sahlan tahay aragtidaadu.
Sida lakabyada, waa inaan kudar muuqaal goob kasta. Sanduuqa la xushay, waxaan ku tusi doonnaa lakabyada la arki doono. Waa in daar aragga ama dami (isha).
Sida loo abuuro lakabyada
Beddelka, haddii ay tahay inaad abuurto halabuurka muuqaal kasta, waa inaad isticmaasho Sawire. Kadib waxaan ku dari doonaa lakab kasta sida sawir ahaan. Adiguna waad awoodaa isku dar sawirrada saamiyada iyo halabuurkaaga. Waxaad heysataa fursad weyn, waa inaad sameysaa ka fikir waxyaabo kale oo aad uga faa'iideysato qalab kasta. Fikrad fiican waa in la abuuro, sida aan ku aragno sawirka hoose, duqsi, si aad ugu dalbato dusha sare ee sawirradeena. Waa inaan ku dhoofinaa qaabka PNG si aan uga fogaano inaan yeelano taariikh.
Si loo gaaro natiijo wanaagsan waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa canaasiirta sida mudada muuqaal kasta. Caadi ahaan waxaan ku saleysan nahay ilbiriqsiyo, waxaan ku muujineynaa muddada ka soo socota fallaarta ku taal meel ka hooseysa laba jibbaaran. Haddii aan gujino, daaqad ayaa la soo bandhigi doonaa si ay u muujiso sida saxda ilbiriqsiyadu. Waan ku siin karnaa waqtiga kala duwan goob kasta.
Waxaan sidoo kale awoodnaa qeexaan waqtiyada aan dooneyno in falka lagu celiyo. Astaantani waa mid caadi ah oo ka mid ah GIFs, inkasta oo aan sidoo kale adeegsan karno haddii aan dooneyno fiidiyowgeena inuu ku ciyaaro wareegga.
Si loogu dhoofiyo fiidiyowga Photoshop, waa inaan raacnaa dariiqa soo socda:
Faylka - Dhoofinta - Fasiraada fiidiyowga ...
Marka shaashadda guryaha ay soo muuqato, waa inaan dooranaa ikhtiyaarka feylku noo abuuro qaab .mp4.
Sidan oo kale, waan awoodnaa samee runtii fiidiyowyo xirfad leh, wada hadal iyo muuqaal ah oo ku dari doona kudar mashruuceena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida wax looga beddelo fiidiyaha Photoshop
Xayaysiiska cusub ee 'Coca-Cola' ee aad "maqli karto"
Paramount wuxuu go'aansaday inuu dib u qaabeeyo Sonic kahor intaan la helin dhaleeceynta